စူးရှလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ပြီး ဆူလေ့ရှိတဲ့ ဒွေးကို သတိရလွမ်းဆွတ်နေတဲ့ သားညီ – Suehninsi
စူးရှလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ပြီး ဆူလေ့ရှိတဲ့ ဒွေးကို သတိရလွမ်းဆွတ်နေတဲ့ သားညီ
သားညီကတော့ ယောက်ျားပီသပြီး ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပျိုမဒီလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားညီက သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာလည်း ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားညီက
သရုပ်ဆောင်အဖြစ်သာမက ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သားညီက အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း လျှောက်လှမ်းနေတာဖြစ်ပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူဒွေးကိုလည်း
အမြဲတမ်းသတိတရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာလည်း သားညီကဒွေးကို သတိရလွမ်းဆွတ်တဲ့အနေနဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတစ်ပုံကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားညီက ” အဲ့လိုမျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီး အဆူမခံရတာ ကြာပေါ့ !!!” ဆိုပြီး ဒွေးဆီကအဆူမခံရတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သားညီနဲ့ဒွေးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိခဲ့ကြပြီး ဇာတ်ကားတွေလည်း အတူတူရိုက်ကူးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကွယ်လွန်သွားတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒွေးကိုတော့ သားညီကအမြဲတမ်းသတိရပြီး အလွမ်းပြေပုံလေးတွေကို တင်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဒွေးနဲ့ သားညီရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်ဟောင်းလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
သားညီကတော့ ယောကျြားပီသပွီး ခနျ့ညားတဲ့ရုပျရညျနဲ့ တဈခတျေတဈခါက ပြိုမဒီလေးတှရေဲ့အသညျးစှဲဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ သားညီက သရုပျဆောငျအလုပျကို နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ လုပျကိုငျခဲ့ပွီး အခုခြိနျမှာလညျး ဇာတျကားတှရေိုကျကူးနဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ သားညီက
သရုပျဆောငျအဖွဈသာမက ဒါရိုကျတာအဖွဈပါ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှေ ရိုကျကူးတငျဆကျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ ။ သားညီက အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ ကွိုးစားလုပျကိုငျရငျး လြှောကျလှမျးနတောဖွဈပွီး အဈကိုဖွဈသူဒှေးကိုလညျး
အမွဲတမျးသတိတရရှိနတော ဖွဈပါတယျ ။ ဒီနမှေ့ာလညျး သားညီကဒှေးကို သတိရလှမျးဆှတျတဲ့အနနေဲ့ အမှတျတရပုံလေးတဈပုံကို တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ သားညီက ” အဲ့လိုမကျြလုံးမြိုးနဲ့ကွညျ့ပွီး အဆူမခံရတာ ကွာပေါ့ !!!” ဆိုပွီး ဒှေးဆီကအဆူမခံရတာကွာပွီဖွဈကွောငျး ရေးသားထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။ သားညီနဲ့ဒှေးကတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ
ခဈြခဈြခငျခငျရှိခဲ့ကွပွီး ဇာတျကားတှလေညျး အတူတူရိုကျကူးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကှယျလှနျသှားတာ ဆယျနှဈကြျောရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဒှေးကိုတော့ သားညီကအမွဲတမျးသတိရပွီး အလှမျးပွပေုံလေးတှကေို တငျလရှေိ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ဒှေးနဲ့ သားညီရဲ့ အမှတျတရပုံရိပျဟောငျးလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
Source : Thar Nyi’s Facebook | Reference & Credit : Myanmarlaod